Danyar waxa ku joogsaday kuwii jeeni qabanlaa. Jidgooyada Tujaartaa ka daran juhun Abaareed. | Dhamays Media Group
Danyar waxa ku joogsaday kuwii jeeni qabanlaa. Jidgooyada Tujaartaa ka daran juhun Abaareed.
Ninba ninkuu ka jino roonyahay ayuu jiiqso leeyahay.
Waxa jiqilka lagu reebayaa jaaquf tag daran.
Danyar waxa ku joogsaday kuwii jeeni qabanlaa.
Jidgooyada tujaartaa ka daran juhun abaareed.
Gartuna waxay ku jiiftaa cishaba ruuxa jeeb madhan.
Waa qayb kamid ah gabayga Jartaale ee abwaan Cashuur.
Previous: JANANKA UGU SAREEYA MARAYKANKA AYAA SHEEGAY IN AY KULAN ALBAABADA U XIDHANYIHIIN UU LA YEELANAYO MADAXWEYNAHA SOMALILAND
Next: Taariikh Qarsooneyd + Muuse Biixi Iyo SNM Xiligii Halganka 1988